महेश बस्नेत, किशान श्रेष्ठ र सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध अपहरणको मुद्दा दर्ता | PBM News.com
काठमाण्डौं २२ बैशाख । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरण सम्बन्धी निवेदन दर्ता गरेको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीले सोमबार डा. यादवको उजुरी दर्ता भएको बताए। प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि कानूनअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भएको उनले बताए। उनले भने, ‘जाहेरी लिएर प्रहरीमा गएका थियौँ। तर प्रहरीले इन्कार गरेपछि कानून अनुसार यहाँ (सरकारी वकिल कार्यालय) मा दर्ता हुनुपर्ने हो। त्यसैले यहाँ गरिदिनुपर्‍यो भनेर उहाँहरु आउनुभयो। त्यसैले विषय के रहेछ। हेर्नुपर्‍यो भनेर कानूनले दिएको जिम्मेवारी अनुसार निवेदन दर्ता भएको छ। ’
सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरी आवश्यक कारवाहीका लागि प्रहरीमा पठाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान अनुसार उजुरी प्रहरीकोमा पठाइने छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५ मा जाहेरी दर्खास्त वा सूचना प्रहरीले दर्ता नगरे सरकारी वकिलको कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ।
आईओएम डीनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी चिकित्सक